Department of Health and Human Services Victoria | Coronavirus (COVID-19) - Oromo
Cuunfaa jijjiirama qoqqobbii
Waan yaadachuu qabdu
Haguuggoo fuulaa ufachu qabda yaroo manarraa deemtu.
Namoota kaan irraa wal irraa hiiqa gahaa tahe yoo xiqqaate meetirii 1.5 eeggachuu qabda.
Yeroo hunda harka kee dhiqadhu
Yoo dhukubni sitti dhagahame mana turi. Dalagaa hin deemin.
Tishuu yookaan ciqilee kee keessatti qufa’i yookaan haxxifadhu
Mallattoo dhukubaa coronavirus (COVID-19) yoo qabaatte laalamuu qabda.
Coronavirus hundi tola laalama. Kunis kan dabalatu namoota Medicare hin qabne, namoota biyya alaa irraa do’annaaf dhufani, hojetoota godaanoo (migrant workers) fi kolu-galtoota (asylum seekers) dabala.
Fuula kana irra
Qoqqobbii Victoria kan yaroo ammaa
Karoorri qoqqobbii laaffisuu fi tarakaanfiileen Victoria gara sadarkaa daandii Dandamata COVID (COVID NORMAL) deebisuu Coronavirus (COVID-19) roadmap to re-opening keessatti ibsamee jira
Karoorri tokko ka naannoo magaalaa Melbourne fi tokko ammo ka baadiyaa Victoriaf ni jira.
Yoo haalli jijjiirame Qondaalli Ol-aanaan Fayyaa qoqobbii jijjiiruu danda’a.
Naannoo Magaalaa Melbourne
Tarkaanfii lammaffaa: naannoo magaalaa Melbourne keessa Fulbaana 28 bara 2020 irraa eegalee.
uggurri mana turuu (bandoon) hin jiru taha magaalaa Melbourne keysa, 28-fuulbana-2020 sa’aa 5 bariisaa irraa eegalee.
Sababoota afuran kanaaf yeroo kam illee mana irraa deemuu dandeessa:
Nyaata bitachuu fi waan si barbaachisuu kan biroof
Sochii qaamaa (ulaa ala fi sa’aa murtoofteef)
Kunuunsa kennuu, gargaarsa yookaan wal’aansa fayyaa barbaaduuf
Yaroo kana irraa eegalee:
Maatiin mana lamaa hanga namoota shaniitti mana keessaa alatti wal arguu ni danda’u.
Barattotni zero kalaassiiraa hanga kutaa 6 dhwaataan barmootatti deebiu, VCE/ VET/VCAL fii manneen barmoota addaa teermii 4-ffaa keessa taha
Oolmaan daa’immanii deebisee banama.
Bakki dalagaa hedduun ni banaman.
Bakki daakaa ni banaman, leenjisaan tokko hanga namoota lamaatti.
Kadhannaa alatti wal gahamu hanga namoota shanii fi luba amantii tokko waliin ni hayyamama.
Walfuudhi alatti namoota shaniin (kan wal dhuudhan lameenii fi ragaa namoota lama dabalatee) ni hayyamama.
Yoo sababa seerawaa malee baadiyaa Victoria deemte Poolisiin Victoria hanga $4,957 si adabuu danda’a. Hiriyoota fi maatii kee waliin hin jiraanne baay’inni isaanii shan caalu waliin alatti yoo wal agarte akkasuma adabamuu dandeessa. Hiriyootnii yookaan maatiin kee sababa quufsaa, kan akka kunuunsa kennuu malee yoo, mana kee si dubbisuu dhufan adabamu dandeessa.
Tarkaanfii Sadii: yoo dhukubni kun yagutoo (average) isaa guyyoota 14 dabran (guutuma godinaa – satate-wide) keessa dhibee haarayni shanii gadi tahee fi ogessii fayyaa itti waliif gale.
Yeroo kan irraa eegalee
Manaa bahu dhoarkamuu fi mana irraa deemuu yookaan gageenya deemuu qabdu irratti qoqqobbiin hin jiru taha.
Mana keessaa alatti hanga namoota 10 wal gahuu ni danda’u.
Maatii mana biraa irraa si dubbisuu dhufan hanga maatii namoota shanii qabaachuu dandeessa. Maatii mana tokko keessaa tahuu qaban.
Barattootni Kutaa 7-ffaa hanga Kutaa 10-ffaa gidduu jiran mana barmootaatti tarii deebi’uu mala Yoo lakoysi dhibee dhukubaa gadi hir’atee fii yooogeessi fayyaa itti waliif gale.
Bakki gabaa fi refeensa yookaan dabbasaa (hairdresser) deebisanii ni banaman.
Manni nyaataa fi manni bunaa teessuma ala hanga namoota 10 keessummeessuu danda’a.
Isportiin alaa qaamaan wal hin tuqne kan namoota gurdguddaa bakkatti deebi’a. Isportiin alaa kanneen umriin isaanii wagga 18 gadi tahe (qaamaan wal tuqan fi wal hin tuqne) itti fufa.
Tarkaanfii Xumuraa: gorsa ogeessa fayyaa irratti hundaawee fi guyyoota 14 dabran keessa dhibeen dhukubaa haarayni hin mul’anne yoo tahee fi ogeessi fayyaas itti waliif gale.
Alatti hanga namoota 50 wal gahuu ni danda’u.
Mana keetti keessummoota hanga namoota 20 qabaachuu dandeessa.
Bakki gabaa hundi ni banamu.
Manni nyaataa fi manni bunaa ni banamu mana keessa namoota 20 kan teessisuu fi walumaa gala keessummoota hanga 50 qabaachuu ni danda’u.
Nageenya isaa irratti hundaawee isportiin itti fufa. Isportiin qaama wal tuqsiisu kanneen umrii hunda keessa jiraniif ni banama.
Wal-fuudhuu fi awwaalchi hanga namoota 50 irratti argamuu ni danda’an.
Adeemsi amantii ni jalqabama, seera fageenya marsaa mitira afurii eegachuun
COVID Normal: Yoo guyyoota 28-iif (guutummaa godinaa) keessa dhibee haarayaan hin jiru yoo tahe, fi Australia keessa dhibeen kun deebisee hin ka’u yoo tahee, fi ogeessi fayyaa yoo itti waliif gale.
Haala nageenyaa irratti hundaawee qoqobbiin ni laaffata yookaan ni kaasama.
Namoota mana irraa dalagaa turaniif bakka dalagaatti deebi’uun ni eegalama.
Wal-fuudhaa fi awwalcha irratti argamuuf lakoysni hin murteessamu.
Wal-gahuu fi manatti walitti dhufanii wal dubbisuuf lakoysni hin murteessamu.
Fulbana 16 bara 2020 baadiyaa Victoria keessa sa’aa 11.59 halkanii irraa eegalee:
Baadiyaa Victoria keessa mana kee keessaa bahuus tahe fageenya hanga deemuu qabdu irratti qoqqobbiin hin jiru.
Maatii biroo keessaa hanga namoota shaniitti kan dhufanii si dubbisan qabaachuu dandeessa. Keessummaan si dubbisuuf dhufanis maatii tokko irraa tahuu qabu. Yeroo qoqobbii kana keessa kan si dubbisuu dhufan maatii tokko qofa filachuu dandeessa. . Ijoolleen umriin isaanii 12 gadi tahe lakoysa maatii si dubbisuu dhufan keessatti hin lakayaman.
Namoota gurdguddaaf gara isportii qaamaan wal hin tuqneetti deebi’uun ni jalqabama. Isportiin alaa kan umriin isaan 18 gadi taheef kan (qaamaan wal-tuquu fi wal hin tuqne) ni jalqabama.
Tarkaanfii Xumuraa: gorsa ogeessa fayyaa irratti hundaawee fi guyyoota 14 dabran keessa dhibeen dhukubaa haarayni (guutuma godinaa keessa) hin mul’anne yoo tahee fi ogeessi fayyaas itti waliif gale.
Alatti hanga namoota 50 wal gahuu ni danda’u
Mana keetitti keessummoota hanga namoota 20 qabaachuu dandeessa.
Manni nyaataa fi manni bunaa ni banamu mana keessa namoota 20 kan teessisuu fi walumaa gala keessummoota hanga 50 qabaachuu ni danda’u
Wal-fuudhii fi awwaalchi hanga namoota 50 irratti argamuu ni danda’an.
Seera qaamaan wal irraa fageenyaa meetirii afurii irratti hundaawee sirni amantii ummataa itti fufa.
Yeroo kana irraa eegalee:
Akkamiin akka nagaa fi nageenyaan jiraattu
Coronavirus (COVID-19) amma illee nu waliin jira, dafees faca’uu danda’a. Nageenya maatii fi hawaasa keenyaa eeguuf, nu hundi gahee keenya haa hojjannu.
Nagaan jiraachuuf waan kanneen salphatti godhuu dandeessa:
Harka kee saamunaa fi bishaaniin yoo xiqqaate sekondii 20-iif dhiqadhu.
Ala deemta yoo tahe haguuggii funyaan fi afaanii uffadhu.
Mana yaalaa deemii of ilaalchisi.
Yoo si dhukube mana turi. Matii dubbisuu yookaan gara dalagaa hin deemin.
Yoo mallattoo dhukubaa qabaatte laalami, gara manaa keettis kallattumaan yeroma san deebi’i.
Gargaarsi ni jira
Viktorianiinni umriin isaanii 12 fi sanaa ol tahan haguuggii fuulaa ufachu qaban yeroo mana keessaa ala deeman, yoo waan hin haguugganneef sababa seerawaa tahe yoo qabaate malee, . Fakkeenyaaf:
haala dhukubaa, kan akka rakkoo gogaa qaamaa fuula irraa qaban, yookaan rakkoo afuura baasachuu yoo qabaatte
Yoo konkolaataa keessa jirta tahe, qofaa kee yookaan maatii kee waliin jirta yoo tahe
Yoo sochii qaamaa hargansiisaa godhchaa jirta tahe, garuu haguuggoo fuulaa qabattee deemuu qabda.
Onkololessa 11 (11-October) sa’aa 11:59 halkanii irraa eegalee haguggoo fuulaa yookaan hagooggoo funyaan fi afaan kee huwisu uffachuu qabda. Gaachena fuulaa qofa uffachuu hin qabdu.
Laalamuu fi adda bahuu
Mallattoo kam illee kan dhukuba coronavirus (COVID-19) yoo qabaatte laalamuu fi hanga itti baha isaa argattutti mana turuu qabda. Gara dalagaa yookaan gabaa hin deemin.
Mallattoon coronavirus kan inni dabalu:
Layidaa (qaama gubaa), dhaamochiisa yookaan dafqisiisaa
Qufaa yookaan dhukubbii laagaa keessaa
Foolii fi dhandhama adda baasachuu dadhabuu
Coronavirus hundi tola laalama . Kunis kan dabalatu namoota Medicare hin qabne, namoota biyya alaa irraa do’annaaf dhufanii, hojetoota godaanoo (migrant workers) fi kolu-galtoota (asylum seekers) dabala.
Yoo dhibeen dhukuba coronavirus (COVID-19) si irratti argame, mana kee keessatti qofaatti bahuu qabda. Odeeffannoo dabalaaf yoo dhibeen dhukuba coronavirus (COVID-19) si irratti argame maal godchuu akka qabdu laali.
Nama dhibee coronavirus (COVID-19) qabu waliin qunnamtii dhihoo yoo qabaatte guyyoota 14 addatti bahu qabda. Odeeffannoo dabalataatiif yoo nama dhibee dhukuba coronavirus (COVID-19) qabu waliin qunnamtii dhihoo qabaatte maal godchuu akka qabdu laali.
Wanneen kanaa gadii kana kara email, sabaa-himaalee yookaan hidhata hawaasaa qabduun hawaasa keef qoodi.
Nama KOOVID-19 qabu waliin yoo tuxxuqqii dhiyeenyaa qabdu ta'e maal akka gootan - What to do if you have been in close contact with someone with coronavirus (COVID-19) (Word)
Nama KOOVID-19 qabu waliin yoo tuxxuqqii dhiyeenyaa qabdu ta'e maal akka gootan - What to do if you have been in close contact with someone with coronavirus (COVID-19) (PDF)
Yoo dhibee vaayirasiikoronaa (KOOVID-19)'n qabamtanii ta'ee maal akka gochuu qabdan - What to do if you've tested positive for coronavirus (COVID-19) (Word)
Yoo dhibee vaayirasiikoronaa (KOOVID-19)'n qabamtanii ta'ee maal akka gochuu qabdan - What to do if you've tested positive for coronavirus (COVID-19) (PDF)
Coronavirus (COVID-19) laalamuun yeroo hin fudhatu, miidhaa hin qabu, saphlaa - Coronavirus (COVID-19) testing is quick, safe and easy (Word)
Coronavirus (COVID-19) laalamuun yeroo hin fudhatu, miidhaa hin qabu, saphlaa - Coronavirus (COVID-19) testing is quick, safe and easy (PDF)
Coronavirus (COVID-19) ilaalamuu - Testing for coronavirus (COVID-19) fact sheet - (Word)
Coronavirus (COVID-19) ilaalamuu - Testing for coronavirus (COVID-19) fact sheet - (PDF)
Cuunfaa jijjiirama qoqqobbii - Summary of changes to Stage 4 restrictions – coronavirus (COVID-19) – Oromo (PDF)
Balaa vaayirasiikoronaa (KOOVID-19) keessan hir’isaa - Reduce your risk of coronavirus (COVID-19) poster (Word)
Balaa vaayirasiikoronaa (KOOVID-19) keessan hir’isaa - Reduce your risk of coronavirus (COVID-19) poster (PDF)
Dhiqadhu harka kee yaroo hunda - Poster - Wash your hands regularly
Hagoogi qufaa keetiifii haxxisoo kee - Poster - Cover your cough and sneeze
Kafaltii Hojii Hafuu Dhibee Daddabraa $1500 - $1500 Pandemic Leave Disaster Payment (Word)
Tajaajila si barbaachisu akka itti argattu - Factsheet - How to access the services you need (Word)
Karaa gargaarsa ittiin argachuu dandeysu yoo kan nagaya dhabni sitti dhagahamu taate, yokaan yaaddoftee cinqamte yaroo dhukubni Korona Vayrasi (COVID-19) jiru kana keysatti - Emergency support fact sheet - (Word)
Karaa gargaarsa ittiin argachuu dandeysu yoo kan nagaya dhabni sitti dhagahamu taate, yokaan yaaddoftee cinqamte yaroo dhukubni Korona Vayrasi (COVID-19) jiru kana keysatti - Emergency support fact sheet - (PDF)
Gargaarsa gajahumsa (jeequmsa) maatii – araddaa manooma ummataa (public housing) - Family violence support – public housing estates (Word)
Akkaataa maaskiin fuulaa itti uffatamu - How to wear a face mask - Oromo (Word)
Akkaataa maaskiin fuulaa itti uffatamu - How to wear a face mask - Oromo (PDF)
Akkaataa maaskiin huccuu ittiin hojjetamu - Design and preparation of cloth mask - Oromo (PDF)
Akkaataa maaskiin huccuu ittiin hojjetamu - Design and preparation of cloth mask - Oromo (Word)